Réponses pour «izany»:
AMBOHIBAO 17 nov 2012 100%
malagasy how satan stops our prayers 96%
Marina tokoa ve izany ?"
ZIONA VAOVAO TANTARA 95%
Teraka niaraka tamin’izany ny fikasana hanohy indray ny famoahana ny Gazety VAOVAO ZIONA, efa navoakan’ny ZIONA VAOVAO tany amin’ny taona ’90 tany ho any.
Article GBUT n°02 2014 95%
Groupe Biblique Universitaire de Tananarive Mifankatiava tahaka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy henatra, ny tsy fahatokisanao ny hafa, ny tsy fahafantaranao azy,sy ny sisa rehetra, ka mila hihavaozantsika izany.
TADY LAHARANA 186 95%
Raha nandalo taty an-tanindrazana ny solontena roa avy amin=ny Biraon= izany Fjkm izany, dia niara-paly tamintsika tamin=ny fitokanana ny sekoly ny 27 sy 28 jolay 2013 lasa teo.
Ahoana no fikolokoloana ny fitadidiana 95%
TOMEFI COMM 02 DFB MENA mai2015 94%
Ho fiatrehana izany , ny Departemanta Fanabeazana eto anivon’ny Foibe miaraka amin’ny Ekipa Foibe Sampana Mena dia niantso Tantsoroka Nasionaly handrindra sy hiketrika izany Jobily izany miaraka amin’ny ekipa Foibe.
Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro voalohany izany.
Fanentanana SAN ANTONIO-2015 93%
Ho an’Andriamanitra, Tompo, irery anie ny voninahitra, fa noho izany talenta sy fahasoavana nomeny izany dia manana fikasana isika hampiara-peo indray any amin’ny "Conférence générale"
fitantanambola FIFATO 93%
Noho izany dia afaka manontany na mitaky ny toebola (vola miditra, vola mivoaka ary vola sisa) amin’ny Trésorier izy.
Article GBUT 2014 92%
10 ANDRO 2018 92%
KORBATANE 5 version 2015 92%
AKON'NY DIOSEZY AMBOSITRA pdf 91%
‚Angamba i Onesimo no niala teto aminao, dia ny mba hanananao azy mandrakizay, tsy toy ny mpanompo intsony, fa tsara lavitra noho izany, dia tahaka ny rahalahy malala.‛ (Filem.1, 15 – 16) Taona natokan’ny Papa Fransoà ho taonan’ny Fianakaviana, nanomboka tamin’ny 5 Oktôbra 2014, ary ho taonan’ny Fiainana Voatokana, nanomboka tamin’ny 30 nôvambra 2014 ity taona ity.
IM9- version malgache 91%
Ahoana moa no hinoany, rehefa avy niaina karazampijaliana toy izany izy ireo, fa hifanaraka amin’izay andrasany ny famindran-toerana vaovao notapahina tsy niaraka taminy?
KORBATANE 5 version 2016 colour 91%
Na izany na tsy izany dia efa mba natao ihany izay farahery nanatsarana ilay boky kely tamin’ny taona lasa mba hahafantarantsika sy tsy hanadinoantsika ireo asa fanompoana tsy manam-paharoa fanao anatin’ity volana masina Sha’abany ity amin’ity taona 2016 ity.
KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY 91%
Na izany na tsy izany dia efa mba natao ihany izay farahery nanatsarana ilay boky kely tamin’ny taona lasa mba hahafantarantsika sy tsy hanadinoantsika ireo asa fanompoana tsy manam-paharoa fanao anatin’ity volana masina Sha’abany ity amin’ity taona 2018 ity.
Bulletin Mensuel Tresor N37 91%
Izany no mahatonga ny Tahirimbolam-panjakana hanatsara hatrany ny fomba fiasany amin’ny fitantanana ary ny fiarovana ny volam-bahoaka.
Gazety fevrier 2019 90%
METHODE DE DISSERTATION EN PHILOSOPHIE - Tsiky Marcel 90%
Asiana ohatra hanazavana izany ary tsara raha asiana tenina mpandinika hafa aza (citation).